KUVUYISA nyhani ukubona indlela uYehova alwandisa ngokukhawuleza ngayo unqulo lokwenyaniso! (Isa. 60:22) Ngenxa yoko, zisoloko zifuneka ngamandla iiHolo zoBukumkani. Emhlabeni wonke, kufuneka kwakhiwe okanye kulungiswe iiholo ezingaphezu kwe-13 000.
Ukuze umsebenzi ukhawuleziswe yaye kungachithwa imali eninzi, iQumrhu Elilawulayo liye lahlengahlengisa amasebe athile okwakha. Kwikomkhulu eliseBrooklyn, eNew York, kusandulw’ ukusekwa iSebe Lokwakha Nelenza Iiplani Ehlabathini Lonke, elisebenza nzima emhlabeni wonke liwubeka phambili yaye liwukhawulezisa lo msebenzi wokwakha nowokulungisa. Amasebe Eengingqi Okwakha Nokwenza Iiplani aseAustralasia, kuMbindi Yurophu, eMerika naseMzantsi Afrika alungelelanisa umsebenzi kwiingingqi zawo, eqinisekisa ukuba iiHolo zoBukumkani zakhiwa ngokukhawuleza kungachithwanga imali eninzi. Akwaqeqesha amasebe akwiingingqi zawo ukuba akwazi ukulungisa iindawo zokunqulela ezikwingingqi yawo. Kuze kwisebe ngalinye, iSebe Lasekuhlaleni Lokwakha Nelenza Iiplani lilungelelanise umsebenzi wokwakhiwa nowokulungiswa kweeHolo zoBukumkani nezeeNdibano.
NgoJanuwari 2015, bonke abadala baseMerika baya kwintlanganiso ekwakubukelwe ividiyo kuyo ecacisa ngelungiselelo elitsha lokwenza iiplani, lokwakha nelokulungisa iiHolo zoBukumkani. Nazi ke izinto abazifundayo.
Ukwakha: Kusetyenziswa iiplani nezinto zokwakha ezifanayo nezilungele iimeko zasekuhlaleni kulandelwa ukhokelo lweKomiti Yokupapasha yeQumrhu Elilawulayo. Ezi zakhiwo akuyomfuneko ukuba zilungiswe qho yaye zihlala ixesha elide, kodwa ziyabukeka yaye azibizi kangako.
Ukulungisa: Kuza kuqeqeshwa amatsha-ntliziyo kwibandla ngalinye ngendlela yokunyamekela nokuzenza zisebenziseke kangangexesha elide iindawo zethu zokunqulela.
Inyaniso kukuba, mkhulu kakhulu wona umsebenzi wokwakha nowokulungisa, kodwa ukusebenza ngomanyano kwabantu bakaThixo kuya kwenza ukuba umsebenzi ukhawuleze ngoxa isetyenziswa kakuhle imali yeminikelo.